Akụkọ - 2019 Glass -Tech International Door & Window Exhibition Mexico
Nleba anya nke 2019 Glass -Tech International Door & Window Mexico
June 2019 Ọnụ ụzọ na windo Mexico International Exhibition door & Windows MEXICO emere na Mexico City. Ihe ngosi ahụ na-emekwa ka mba Central na South America nwee ọhụụ ma na-enye ọwa azụmahịa ụzọ abụọ maka ụlọ ọrụ iko na Mexico na mba ndị gbara ya gburugburu na South America. Ndị otu anyị FOEN nke ngalaba esenidụt gosipụtara ọmarịcha ngwaahịa na ngwaahịa ụlọ ọrụ ọhụrụ emepụtara na ụzọ teknụzụ & windo.
Fujian Fenan Aluminum Co., Ltd egosipụtawo ọnụ ụzọ na windo nke ya, yana ikuku dị elu, imirikiti mmiri, ihe mkpuchi ọkụ, ihe mkpuchi na arụmọrụ ndị ọzọ dị egwu, yana mgbochi anwụnta, mgbochi ohi, mgbochi ohi, ọdịda na ihe ndị ọzọ. oke ọrụ siri ike. Ọdọrọ na-adịghị agwụ agwụ iyi nke ndị na-egosi na-eleta na ịgbanwe echiche. N'etiti ha, enweghi nnukwu ọbịa nke ugwu na-enye otuto dị elu maka mmelite nke FOEN, ma gbaa FOEN ume ka ọ gaa n'ihu na-aga n'ihu na mmụọ nke ihe ọhụrụ, na-etinyekwu onyinye na mmepe ahụ na ụlọ ọrụ windo & windo.
Foen dị na afọ 32 na teknụzụ & Ahụmịhe, anyị hibere na 1988 dị ka onye na-ekesa profaịlụ aluminom. N'ime afọ iri mbụ, anyị banyere n'ahịa ma ahụmịhe nke ndị oke. Na 1998, Tọrọ ntọala ụlọ ọrụ mbụ FOEN igwe anaghị agba nchara Fu Fuhou City. Emechara ntọala profaịlụ Alfaum nke Alfaum na 2005. Na 2012, anyị meriri ndị na - eweta profaịlụ aluminom Top 20 na China, na 2013, anyị tinyere ahịrị osisi anodized ụwa kachasị ukwuu na ụwa. N’afọ 2014, enọrola ndị na-eweta Aluminium iri n’ịma na China. N’afọ 2015, Guzosie ntọala sistemụ windo Smart. N’afọ 2016, ụlọ ọrụ mmepụta ihe Got FOEN dị na North iji rụọ ọrụ. Na 2017, sistemụ windo FOEN Art Gellary mepere na ụlọ ọrụ aluminom nke Henan FOEN guzobere. N'afọ 2018, e jiri ụdị sọks 500 kachasị ọnụ ahịa ha na China sọpụrụ anyị. N’afọ a, a na-arụ ntọala ụlọ ọrụ alumọn anyị nke atọ.
N’ọdịnihu, anyị bụ FOEN, site na nzụlite na ọganiru nke teknụzụ ngwaahịa, echiche zuru oke nke njikwa mba na mba, Na-agbaso usoro ahịa, na-enwe afọ ojuju ndị ahịa mgbe niile, maka mmepe ụlọ ọrụ iji nye nkwa siri ike, Fujian Fenan Aluminum Co., Ltd ga-edobe akara ngosi akara dị elu na ọkwa ụwa sara mbara.